Abakhiqizi Bezinja Nabahlinzeki | I-China Dog Harness Factory
I-Adjustable Oxford Dog Harness
Ihhafu yezinja ye-oxford eguquguqukayo igcwele isiponji esinethezekile, akuyona ingcindezi entanyeni yenja, idizayini enhle yenja yakho.
Ihhafu yezinja ye-oxford eshintshekayo yenziwa ngezinto zekhwalithi ephezulu eziphefumulekayo. Kugcina isilwane sakho esinothando sihle futhi sipholile ngenkathi sikugcina ekulawuleni okuphelele.
Isibambo esengeziwe ngaphezulu kwaleli bhande senza kube lula ukulawula nokuhamba ngokudonsa kanzima nezinja esezikhulile.
Le harness yezinja ye-oxford eguquguqukayo inosayizi aba-5, elungele izinja ezincane eziphakathi nendawo nezinkulu.
Inja Ukuphepha Amabhande Nge Isihlalo Belt
Ibhande lokuphepha lenja nebhande lesihlalo linendawo egcwele ivesti eligcina umngane wakho onoboya ngokunethezeka phakathi nohambo.
Amahhanisi okuphepha enja nebhande lesihlalo anciphise ukuphazamiseka komshayeli.Ihhanisi lokuphepha kwenja ligcina izinja zakho zivikeleke kahle esihlalweni sazo ukuze ukwazi ukugxila emgwaqeni ngenkathi usohambweni.
Leli bhande lokuphepha lenja elinebhande lesihlalo kulula ukulifaka futhi lisuke. Yibeke phezu kwekhanda lenja, bese uyayiqinisa, bese ulungisa imichilo ngendlela othanda ngayo, unamathisele ibhande lokuphepha ku-Dingi bese ubopha ibhande lesihlalo.
Inayiloni Mesh Inja Iboshwe
Inayiloni yethu enamathela ezintofontofo futhi ephefumulekayo inja yakhiwe ngezinto eziqinile futhi ezingasindi.Ivumela i-pup yakho ukuthi ihambe kulezo zihamba ezidingeka kakhulu ngaphandle kokushisa ngokweqile.
Iyashintsha futhi inamabhakede epulasitiki akhipha ngokushesha ne-D-ring yokunamathisela i-leash efakiwe.
Le ntambo yokubopha inayiloni inezinhlobonhlobo ezinkulu zamasayizi nemibala ehlukahlukene elungele zonke izinhlobo zezinja.
Ukubophela Ngokwezifiso Izinja
Lapho inja yakho idonsa, amahhanisi enkambiso yezinja asebenzisa ingcindezi emnene esifubeni nasemahlombe ukuqondisa inja yakho eceleni bese ibuyisela ukunaka kwayo kuwe.
Ihhanisi elenzelwe izinja lihlala phansi esifubeni sesifuba esikhundleni somphimbo ukuqeda ukuminyana, ukukhwehlela nokuvala umlomo.
Ihhanisi elenzelwe izinja lenziwe ngenayiloni elithambile kodwa eliqinile, futhi linamabhakede asheshayo asezintanjeni zesisu, kulula ukuwafaka futhi uwavale.
Leli harness langokwezifiso lenja liyazinqanda izinja ekudoneni leash, lenza ukuhamba kujabulise futhi kungabi nengcindezi kuwe nakwinja yakho.
Inja Yokusekela Phakamisa Amabhande
Inja yethu yokuphakamisa inja yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ithambe kakhulu, iyaphefumula, kulula ukuyigeza futhi iyashesha ukoma.
Amahhanisi okuphakamisa inja azosiza kakhulu lapho inja yakho yehla yenyuka izitebhisi, igxuma ingena iphuma ezimotweni nakwezinye izimo eziningi. Ilungele izinja ezinokuguga, ezilimele noma ezinomkhawulo wokuhamba.
Le ntambo yokusekelwa yinja kulula ukugqoka. asikho isidingo sezinyathelo eziningi kakhulu, vele usebenzise ukuvalwa okubanzi nokukhulu kweVelcro ukuqala / ukuvala.
I-Reflective No Pull Dog Harness
Le harness yenja yokudonsa ine-tepi ekhanyayo, yenza isilwane sakho sibonakale ezimotweni futhi sisize ukuvimbela izingozi.
Imichilo eshintsheka kalula nendwangu emaceleni omabili igcina ivesti kahle isendaweni iqeda amakhoba nokumelana nokugqoka okokuvikela.
Ihhanisi yezinja ekhanyayo ayenziwe nge-nylon oxford esezingeni eliphezulu ephefumulayo futhi entofontofo.so iphephe kakhulu, ihlala isikhathi eside futhi inesitayela.